गाडी बन्द, जहाज बन्द, होटल बन्द, शैक्षिक संस्था बन्द,अरु थुप्रै कुराहरु मा प्रतिबन्ध अनि लकडाउन चाहिँ कसरी खुला? – Namaste Dainik
July 21, 2020 NamastedainikLeaveaComment on गाडी बन्द, जहाज बन्द, होटल बन्द, शैक्षिक संस्था बन्द,अरु थुप्रै कुराहरु मा प्रतिबन्ध अनि लकडाउन चाहिँ कसरी खुला?
काठमाडौँ– सरकारले मंगलबार राति १२ बजेदेखि आकस्मिक रुपमा लक डाउन अन्त्य भएको घोषणा गरेको छ। कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा उपचारका लागि भन्दै चैत ११ गतेदेखि लागू भएको लकडाउन अन्त्य भएको सरकारले औपचारिक घोषणा गरे पनि व्यवहारिक रुपमा भने भदौको सुरुसम्मै लागू हुने देखिएको छ।
सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाले लकडाउन मंगलबार राति १२ बजेदेखि अन्त्य भएको बताए पनि होटल, रेष्टुरेन्ट साउन १५ गतेदेखि, हवाई उडान भदौ १ गतेदेखि, सीमा प्रतिबन्ध साउन ३२ गतेसम्म बन्द रहने जानकारी दिएका छन्।
त्यस्तै शैक्षिक संस्थाले भदौ १ गतेदेखि भर्ना र परीक्षा मात्र सञ्चालन गर्न पाउने, पठन पाठनबारे पछि निर्णय हुने भनिएको छ भने लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात पनि भदौ १ गतेदेखि खुल्ने सरकारले जनाएको छ।
एकातिर लकडाउन अन्त्य भएको घोषणा गर्ने अर्कोतिर मुख्य क्षेत्र भदौ लागेपछि मात्र खुला हुने सरकारको निर्णयले द्वैध मान्यता देखाएको छ।
मुख्य क्षेत्र भदौ लागेपछि खुल्ने भने पनि लक डाउन अन्त्य भएको घोषणा सरकारले गर्नुका पछाडि राजश्व संकलनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्रोतको दाबी छ। सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दी पूर्ण रुपमा खुलेको एक महिनाभित्र भ्याट, अन्तशुल्क, आयकर उठाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चले लकडाउन अवधिलाई शून्य अवधि मानेर कर प्रशासनमा समेत यस्तो आदेश दिएपछि ढुकुटीमा जम्मा हुनु पर्ने ५२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रोकिएको छ।
पुर्व माओवादी छिन्नभिन्न भयो भन्दै प्रचण्ड अति दुखी।
काठमाडौंमा ढोका थुनेर बस्दा ‘झ्यालबाट छिर्‍यो’ कोरोना।